mandeep « Sahakari Nepal
कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्‍न
काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.नेफ्स्कूनद्वारा काभ्रेको धुलिखेलमा यही फागुनमा सञ्चालित फिल्ड व्यवस्थापक कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम आज सम्पन्न भएको छ । तीनदिन सम्म चलेको उक्त
काठमाडौं । काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.कास्कूनले कलङ्‍की क्षेत्रमा सञ्‍चालित साकोसका व्यवस्थापन प्रमुखहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम परिकार बैङ्‍क्‍वेट, स्यचार्टर, काठमाडौंमा ३३ जना व्यवस्थापन प्रमुखहरुको सहभागीतामा सम्पन्‍न गरेको छ ।
सहकारी विभागको रजिष्ट्रारमा ॠषि तिवारी
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको सरुवा भएको छ । विभागको रजिष्ट्रारमा ऋषि तिवारीलाई ल्याइएको छ । तिवारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विभागमा सरुवा गरिएको हो
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्रसान्त क्षेत्र ९आइसीए एपी० को मिति २०७७ फागुन १२ गते क्षेत्रीय सभा सम्पन्न भएको छ । सो सभामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल, महासंघका वरिष्ठ
काभ्रे । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले शक्ति, सामर्थ्य र सहनशिलता नै सफलताको कसी रहेको बताउनुभएको छ ।
पर्यटन सहकारी प्रवद्र्धन सम्बन्धी रणनैतिक योजना निर्माण कार्यक्रम मिति २०७७ फागुनमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजना र नेपाल पर्यटन केन्द्रीय सहकारी संघको संयोजनमा पर्यटन सहकारीको विषयमा रणनैतिक
काठमाडौं । गोंगवु क्षेत्र आसपास सञ्चालित आठ बचत तथा ऋण सहकारीहरु नेफ्स्कूनद्वारा प्रवर्द्धित साकोस गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रम प्रोवेसनमा आवद्ध भएका छन् । संघको गोंगबु फिल्ड कार्यालयमा आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा नेफ्स्कून
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नेपाल केन्द्रीय पर्यटन सहकारी संघको संयोजनमा पर्यटन सहकारी प्रवद्र्धन सम्बन्धी रणनैतिक योजना निर्माण कार्य शुरु गरेको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन महासंघका सञ्चा‍लक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष
सहकारी सचेतना गोष्ठी
दैलेख । जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकामा नेफ्स्कूनद्वारा सञ्चालित आधारशिला कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी सचेतना गोष्ठी आज सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीका प्रमुख अथिति गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले सहकारी संघ संस्था व्यवस्थापन,
गोंगबु सिद्धि साकोस प्रोवेसन कार्यक्रम आवद्ध
काठमाडौं । जिल्लाको पुरानो सहकारी गोंगबु सिद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नेपाल स्तरको साकोस गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रोवेसनमा आवद्ध भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल बचत तथा ऋण
नेफ्स्कून साकोस म्यानेजर्स क्लबले देशभर सञ्जाल विस्तार गर्ने
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायिक प्रबर्द्धन तालिम
सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण
साकोसहरुबीच नविनतम सिकाइ आदानप्रदान
आधारशिला कार्यक्रम सम्झौता
सहकारीको सन्दर्भ ब्‍याजदर कार्यान्वयन प्रभावकारिताको सघन अनुगमन